Bulawayo City: Shasha yema ‘red card’ | Kwayedza
Bulawayo City: Shasha yema ‘red card’
12 Apr, 2019 - 00:04	 2019-04-11T15:08:31+00:00 2019-04-12T00:04:47+00:00 0 Views
Chikwata cheBulawayo City mwaka wapera ndicho chakaita mukurumbira usina kunaka wekuve nevatambi vakawanda vakapihwa ma”red card” vachiburitswa mumutambo uyu.
CHIKWATA cheBulawayo City mwaka wapera ndicho chakaita mukurumbira usina kunaka wekuve nevatambi vakawanda vakapihwa ma “red card” vachiburitswa mumutambo uyu.
Mumutambo wenhabvu, mutambi kana akapihwa “red card” anobva aburitswa mumutambo uyu, chikwata chake chosara chave nevatambi vakashota kusvika mutambo wapera. Pamutemo wenhabvu, pane mhando mbiri dzema “red card” anopihwa vatambi.
Kana muridzi wepembe akaona kuti mutambi akuvadza mumwe akamupa “red card”, mutambi uyu haazotambe mitambo mitatu inotevera. Kozoti kana mutambi akapihwa ma “yellow card” maviri, anobva aita ma “red card” obva atoburitswa mumutambo asi anongopihwa chirango chekusatamba mutambo mumwe chete unenge uchitevera.
Mutsvakurudzo yakaitwa neKwayedza svondo rino, zvakaonekwa kuti mugore ra2018 – mumitambo 34 yakatambwa yePremier Soccer League – chikwata cheBulawayo City ndicho chine vatambi vakawanda vakapihwa ma “red card” avo vanove vashanu. Bulawayo City yaiteverwa neCAPS UNITED neNgezi Platinum Stars izvo zvine vatambi vana pachikwata chimwe nechimwe vakapihwa ma “red card”.
Triangle United ine vatambi vatatu vakapihwa ma “red card” zvakare. Zvimwe zvikwata zvinoti Highlanders FC, Dynamos neYadah Stars zvine vatambi vaviri vaviri vakapihwawo ma “red card”.
Panyaya yema “yellow card”, Yadah Stars ndiyo yaitungamira sezvo ine vatambi 57 vakapihwa makadhi aya. DeMbare ndiyo yaitevera iine vatambi 56 vakapihwa ma “yellow card” zvakare.
Mukushi wemashoko wePSL – Kudzai Bare – anoti sesangano vanokoshesa kuti zvikwata zvitambe zvakanaka nezvimwe uye vanoranga vatambi nezvikwata zvinenge zvapihwa ma “red card” nema “yellow card” akawanda.
Anoti vanopawo mubairo kune chikwata chine vatambi vashoma vanenge vapihwa makadhi erudzi urwu.
“Tine sangano redisciplinary committee rinoongorora matambiro anenge achiita zvikwata zvakasiyana. Pakupera kwemwedzi, tinoongorora kuti ndechipi chikwata change chiine hunhu hwakanaka uye mwaka iwowo chinohwiniswa mubairo,” anodaro Bare.
Bare anoti mwaka wadarika, chikwata cheBulawayo Chiefs chicho chakahwinisa mubairo weThe Most Disciplined Team, icho chine vatambi 40 vakapihwa ma “yellow card”.
Kuvatambi zvakare, anenge apihwa ma “red card” akawanda anenge asisazokwanisa kurwira mubairo weSoccer Star of the Year kunyangwe achitamba nhabvu inonwisa mvura.
“Zvinoenda zvakare kuvatambi venhabvu vanenge vapihwa ma ‘red card’ nema ‘yellow card’ akawanda, ega anotozvibvisa mukurwira mubairo mukuru wevatambi weSoccer Star of the year.
“Mwaka paunenge uchitsva tinenge tichiongorora vatambi vese tichivapa zvibodzwa nekuvatorera. Saka kana wapera, vamwe vanototadza kuvhoterwa kuve Soccer Star sezvo vanenge vakakoromora mwaka wese. Saka vatambi nezvikwata ngavatambe vachiziva izvi,” anodaro Bare.
Kwayedza yakaedza kutaura nasachigaro weBulawayo City – Jerry Sibanda – kuti inzwisise kuti sei chikwata chavo chine vatambi vakawanda vakapihwa ma “red card” asi akangostenga-tsenga mukanwa.
“Ndokumbirawo mutaure nevakushi vemashoko vechikwata chedu panharembozha dzavo, ndivo vanopindura zvese zvamunoda kunzwa,” anodaro.
Nhare dzakapihwa Kwayedza naSibanda dzichinzi ndedzevashandi vanoona nezvekukushwa kwemashoko kuchikwata ichi dzaingorira pasina anodavira.